Ciyaaryahanka qiimaha sare ku soo gallay Real Madrid ee Gareth Bale ayaa sida faraska u dhaafay difaaca dhulka ku dhegan ee Barcelona, Real Madridna u horseeday Horyaalnimada Copa del Rey ee wadanka Spain.
Ciyaartii darbiga ahayd ee Finalka koobka labaad ee wadanka Spain oo Barcelona iyo Real Madrid ku dhex martay garoonka Mestalla ee magaalada Valencia ayaa si mucjiso ah waxay guushu ugu raacday kooxda Madrid 1-2.
Madrid ayaa ku horeysay goolka dhalinta , waxaana goolkii furitaanka u saxeexay laacibka reer Argentina ee Di Maria .
Laakiin Barcelona ayaa la timid goolkii barbardhaca kadib markii gool madax ah uu shabaqa dhigay xidiga difaaca ee Marc Bartra.
Layaabku wuxuu dhacay . kubad uu badhtanka garoonka oo cidhif ah ka qaatay Bale markii la waayay cid ka celisa oo orod ku gaadha sidii uu ula sii socdayna uu daba mariyey goolwade Pinto daqiiqadii 85 aad ee ciyaarta.
Madrid ayaana loo caleemo saaray kooxda Horyaalka Copa del rey ee wadanka Spanishka.
Barcelona Vs Villarreal: Barcelona Oo Gellin Horeba Shaacisay Xulkeeda Kulanka Caawa
Rasmi: Daniel Agger Oo Ka Fadhiistay Kubadda Cagta
Xidigga NBA-da Ee Dwyane Wade Oo Shiinaha Ku Baranaya Ciyaarta Shaolin Kungfu + Sawirro
Maxkamad Xukun Ku Ridday Ciyaartoy Ka Tirsan Liverpool
Tababaraha Mo Farah Oo Eedaymo Hor Leh Loo Jeediyey